पौष १ गते २०७६
पोखरा ८ सिमलचौरमा रहेको पिसजोन एकेडेमीका विद्यार्थीले सोमबार बृहत् विज्ञान प्रदर्शनी गरेका छन् । विज्ञानको चमत्कार र विकासले गरेका सांसारिक उपलब्धिलाई सरल तरिकाले विद्यार्थीहरुले स्थानीय स्रोत र साधानको उपयोग गरी प्रदर्शनी गरेका हुन् । कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुले समूहगत रुपमा विभिन्न वस्तुहरुको प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले फायर सेन्सर रोवोर्ट, हाइड्रोलिक एक्जाभेटर,डोजर तथा क्रेन बनाएका थिए । यसैगरी स्मार्ट सिटी परिकल्पनाको डेमो प्रदर्शन, इलेक्ट्रिक कार,विण्ड मिल, सोलार हाउस,… पुरा पढौ
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको तेह्रौं महाधिवेशन तथा २६औं साधारणसभा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । मंसिर ७ गते सम्पन्न साधारण सभाले नवराज कुँवर नेतृत्वमा ४० सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । कुँवर प्रतिस्पर्धी सुनैना पाण्डेको भन्दा १२ प्रतिशत बढी ल्याएका छन् । क्यान महासंघको उपाध्यक्षमा रणजितकुमार पोदार, खुसल रेग्मी, रत्नतारा तुलाधर (बैद्य) र रेशम गिरि निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै महासचिवमा नारायणबहादुर थापा चुनिए । सचिवमा राजेन्द्रप्रसाद… पुरा पढौ
आइफोन र आइप्याड अपडेट आजै गरौं, नत्र…
एप्पलले पुराना आइफोन र आइप्याडहरुमा आज आइतबारसम्ममा पछिल्लो आइओएस सफ्टवेयर अपडेट नगरेमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन नसक्ने जनाएको छ । आइफोन र आइप्याड सन् २०१२ का वा त्यो भन्दाअघि निर्माण गरिएकाहरुलाई नोभेम्बर ३ अर्थात् आज आइतबारसम्ममा अपडेट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । एप्पलकाअनुसार यो जीपीएस टाइम रोलओभरको विषयका कारणले हो । हरेक १९ वर्षमा जीपीएस डिभाइसको समय र तिथीको रिसेट गर्नु जरुरी हुने अमेरिकी उर्जा मन्त्रालयको विद्युत कार्यालयले जनाएको छ । एप्पलले… पुरा पढौ
स्मार्टबाट खोसिएको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई
स्मार्ट टेलिकमबाट खोसिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्बको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । २ वर्षमा सक्ने गरी प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको काम साढे दुई वर्षमा करिब १ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि प्राधिकरणले गत साता स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेपछि अन्तरिम आदेश माग्दै स्मार्टले आइतबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने… पुरा पढौ
पेपल फेसबुकको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरियो
संयुक्त राज्य अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल एक थियो । पेपलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विश्वव्यापी यस क्रिप्टोकरेन्सी क्लबबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो । यस क्लबमा भिसा, उबर, लिफ्ट र मास्टरकार्ड समेतका कम्पनीहरु सदस्य छन् । अमेरिकाको सान जोजेमा मुख्यालय रहेको पेपलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा… पुरा पढौ
खुल्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र
युवा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनको नेतृत्वमा काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको केन्द्रको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो। करिब ८ करोड बजेटमा सो केन्द्र स्थापना गरिएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुनले नयाँ–नयाँ सोच भएका युवाहरुलाई उद्यमी बन्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिन केन्द्र खोलिएको बताए । पुरा पढौ
अनलाइन टिकटिङमा बढ्दो आकर्षण, सरकारले सहयोग गरे एकजना पनि लाइन बस्नुपर्दैन : बससेवा
नेपालीहरूको महान चाड दशैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आ–आफ्नो घरमा जाने चटारो सुरू भएको छ । दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएपछि मानिसहरू राति नै गएर बस टिकटका लागि लाइन लाग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने भएपछि अनलाइन टिकटिङमा पनि आकर्षण बढेको छ । अघिल्लो वर्षमा करिब ४ हजार जनाले अनलाइन टिकट काटेका थिए । तर यो वर्ष बुकिङ खुलेको एक सातामै करिब १० हजार जनाले टिकट… पुरा पढौ
फेसबुकले लाइक बटन हटाउँदैछ ! त्यसपछि के हुन्छ ?
सेप्टेम्बर पहिलो साता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले लाइकको गणना हटाउने तयारी गरिरहेको समाचार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आए । फेसबुकले भने औपचारिक रुपमा त्यस्तो घोषणा गरेको छैन । त्यतिबेला प्रकाशित समाचारमा विध्वंसात्मक रुपमा प्रयोगकर्ताले अरुसँग तुलना गर्न थालेकाले त्यसो गर्न लागिएको फेसबुकका कतिपय अधिकारीहरुले बताएका थिए । लाइक धेरै पाएन भने आफूलाई कमजोर ठान्ने र मनोवैज्ञानिक रुपमा नै यस्तो समस्या देखिएको ती समाचारमा जनाइएका थिए । नजानेरै विश्वका दशौं लाख मानिस मानसिक… पुरा पढौ
विश्वभरि अडियो भिडियो र प्रिन्ट मिडिया पेपरलेस र अनलाईन हुदै गएका छन् । भिडीओ, अडियो, अनलाईन होस् कि प्रिन्ट, मिडिया भनेको उही नै हो-माध्यम र प्रविधि मात्र फरक हुन् । अनलाईन हुदैमा त्यसको पोष्ट साईबर क्राईम हुने भन्ने हुनै सक्दैन । मिडिया अनलाईन वा अन्य माध्यम जे भए पनि फौजदारी क्राईम हुदैन । देवानी प्रकृतिको कसुरमा फौजदारी आरोप लगाउन सकिने वर्तमान साईबर ऐन त्रुटीपूर्ण त हुदै हो, यसबारे सरोकारवाला र… पुरा पढौ
तपाइँले सेक्स कहिले गर्नुभयो ? फेसबुकले थाहा पाउँछ
तपाइँले अन्तिम पटक कहिले यौन सम्पर्क गर्नुभयो ? यो कुरा फेसबुकलाई थाहा हुन्छ । यतिमात्र होइन महिलाहरुको महिनावारी चक्र तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका गर्भनिरोधक साधनहरुको बारेमा पनि फेसबुकले थाहा पाउँछ । प्राइभेसी इन्टरनेसनलको एक रिपोर्ट अनुसार महिलाले प्रयोग गर्ने पिरियड ट्रयाकर एपले उनीहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न नितान्त व्यक्तिगत जानकारीहरु राख्दछ र त्यसलाई तेश्रो पक्षलाई समेत प्रदान गर्दछ । त्यस्ता तेश्रो पक्ष अर्थात् थर्ड पार्टी सर्भिसहरुमा विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोसल नेटवर्किङ्ग साइट… पुरा पढौ